Amasiko amaDatshi kwiKrisimesi | Ukuhamba kwe-Absolut
Amasiko amaDatshi ngeKrisimesi
Las Amasiko nezithethe zaseDatshi ngeKrisimesi ziyafana kakhulu nezamanye amazwe akumbindi nakumantla Yurophu. Nangona kunjalo, inezinto ezithile ezizodwa ezenza yahluke ngakumbi kwaye iyathandeka.
Kule posi siza kuvavanya ezinye zezi zithethe zinento yokwenza nemibhiyozo, iimarike kunye nokutya okuqhelekileyo kwale mihla. Sijoyine kolu hambo lubangela umdla IKrisimesi eNetherlands.
1 ISinterklaas, umDatshi 'Santa Claus'
2 Iimarike zeKrisimesi kunye nemihombiso eNetherlands
3 Amasiko amaDatshi kwiKrisimesi etafileni
ISinterklaas, umDatshi 'Santa Claus'
Ngokungafaniyo nehlabathi liphela, eNetherlands olona suku lubaluleke kakhulu ebantwaneni Disemba 5. Ngumhla lowo, iiveki ezintathu phambi kweKrisimesi Sinterklaas (INgcwele uNicholas) ubaphathela izipho zakhe.
Njengothusayo njengoko isenokuvakala, ilivo inalo USinterklaas uhlala eSpain apha ekuhambeni konyaka. Kodwa akaphuthelwa ngumhla wakhe weKrisimesi kunye nabantwana baseDatshi, ehamba ngesikhephe esiya kwiHolland ebandayo ene-steamboat egcwele izipho kunye nezinto ezimangalisayo.
Ukufezekisa umsebenzi wakhe, iSinterklass unoncedo lomkhonzi wakhe, UZwarte Piet (Pedro el Negro), okwabizwa ngokuba ngu Ipipi yesooty o Roetpiet (Pedro Hollin okanye Pedro de la Chimney).
Ukufika kwizibuko (unyaka nonyaka khetha eyahlukileyo) lixesha elinomdla, kunye nesinye sezona zithethe zithandekayo zaseDatshi ngeKrisimesi. Iintsapho ziyaxinana ezibukweni. Xa iSinterklaas kunye neyakhe pieten ("ii-pedros" zabo) zibeke iinyawo zazo emhlabeni, iintsimbi zecawe ziqala ukukhala kwaye abantwana bangenza imikhwazo yemincili.
Xa abantwana beyokulala, iSinterklaas iya kukhenketha izixeko needolophu zeli lizwe ngehashe lakhe elimhlophe. Uya kushiya izipho kunye neelekese kubantwana abebelungile; uya kufaka ababi engxoweni kwaye abathathe aye eSpain.
Ukuba konke oku kuyenzeka ngobusuku bukaDisemba 5-6, uthini nge Ngosuku lweKrisimesi eHolland? Isidlo sangokuhlwa sibhiyozelwa njengentsapho, kodwa kuba abantwana sele bezifumene izipho kwiiveki ezidlulileyo, ngoku lithuba labantu abadala. Nangona kunjalo, kukho amakhaya amaninzi nangakumbi apho uFather Christmas okanye uSanta Claus (eNetherlands bambiza UKerstman) kwenzeka kwakhona ukushiya izipho zakhe.
Iimarike zeKrisimesi kunye nemihombiso eNetherlands
Amsterdam ngexesha leKrisimesi
Ukusuka nge-Saint Nicholas Day (nge-6 kaDisemba) ukuya kwi-Christmas Eve, izitrato zeedolophu ezinkulu zelizwe zigcwele izibane nezihombiso. Uninzi lweedolophu zaseDatshi zakhiwe iziteshi, ukukhanya kuyabonakala emanzini ayo ke oku kukhanya kuhle ngakumbi.
Ezindlini kulisiko ukukhwela umthi weKrisimesi kwaye ubeke izibane kunye nezinye izinto zokuhombisa eminyango, kwiifestile nakwizinto ezingaphambili. Usapho kunye nabahlobo batshintshiselana nokuvuyisana nabo babhala I-kerst entle (Ikrisimesi emnandi eDatshi). Ngokwesiko, usuku lweKrisimesi kunye nosuku lweKrisimesi kufuneka lubhiyozelwe ekhaya, nosapho.
Endaweni yoko, ngoDisemba 26 (Tweede Kerstdag okanye "usuku lwesibini lweKrisimesi") zihlala zinikezelwe ukutyelela olona sapho lukude okanye ukuya zokuthenga iholide, kuba phantse zonke iivenkile zivuliwe ngaloo mini.
Los Iimarike zeKrisimesi eHolland zintle kakhulu kwaye ziyinyani kwizixeko ezincinane kunezo zikhulu. Ezinye zezona zibalaseleyo zezona zihlelwe ngaphakathi Haarlem y Dordrecht, kunye neerink zayo ezinkulu zomkhenkce kunye nezitali zezitrato zomthi apho ungangcamla khona iwayini enezinto ezininzi. Ukukhankanywa okhethekileyo kwimarike yeKrisimesi kwi IValkenburg, embindini welizwe, efakwe kwemiqolomba engaphantsi komhlaba, okanye kwintengiso edadayo ye Ukhutshiwe.
Amasiko amaDatshi kwiKrisimesi etafileni
Gourmetten kwisidlo sangokuhlwa saseDatshi seKrisimesi
Nangona i-gastronomy yaseDatshi ingenalo udumo lwehlabathi, ukutya kwendabuko kweKrisimesi kunika izidlo ezinomdla ezifanelekileyo ukuzazi.
Kukho isithethe esidala esibizwa ngokuba Gourmetten equka ukubeka isitovu esincinci phezu kwetafile ngoSuku lweKrisimesi (ebizwa UEerste Kerstdag okanye "usuku lokuqala lweKrisimesi"). Izidlo sangokuhlwa ziqokelelene kwisitovu apho ukutya okumnandi kufudunyezwa kwiindawo ezincinci, nganye isebenzisa itreyi yayo. Unokuthi kunjalo into efana neFrance raclette.
Kwisidlo sangokuhlwa seKrisimesi eHolland awungekhe uphuthelwe inyama eyosiweyo (inyama yenkomo, idada, i-pheasant ...) ihamba kakuhle nohlukile imifuno kunye neesosi. Ewe kunjalo, iintlobo ezahlukeneyo ze Isonka samasi saseDatshi. Isiselo ke, nangona kweli lizwe kuselwa ibhiya eninzi kunewayini, le yokugqibela yeyona ikhethiweyo kwisidlo sasemini okanye sasebusuku soluhlobo.
Emva kwesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa, kufika iidessert. Lixesha lokuba unandiphe i Incwadi yeBhanki, ezinye ii-cookies ze-marzipan ezenziwe ngendlela yoonobumba. Into eqhelekileyo kukuba ziphekwe ekhaya zisebenzisa ii-inishiyali zamalungu ohlukeneyo osapho. Olunye ukhetho olumnandi yi I-Pepernoot, isinamon emnandi kunye nekeyiki yeziqholo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Amasiko amaDatshi ngeKrisimesi
Imele ntoni iflegi yaseGrisi?
Iindawo zokuhamba wedwa